Ilhaan Cumar oo shaacisay inay la aqal gashay Tim Mynett oo ah la taliyaheeda arrimaha siyaasadda – HalQaran.com
Ilhaan Cumar oo shaacisay inay la aqal gashay Tim Mynett oo ah la taliyaheeda arrimaha siyaasadda
Ilhaan Cumar iyo Seygeeda cusub ee Tim Mynett /Instagram Photos
Minnesota (Halqaran.com) – Warbaahinta Fox News ee dalka Mareykanka ayaa ku soo warrantay in xildhibaanad Ilhaan Cumar oo katirsan aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka, lagana soo doorta Minnesota ay shaacisay inay aqal gashay.
Ilhaan ayaa barteeda Instagramka soo dhigtay sawir iyada iyo saygeeda cusub ee Tim Mynett. Tim ayaa horay u ahaa la taliyaha Ilhan Cumar ee arrimaha siyaasadda.
“Waan guursaday, waxaan lamaane ku ahayn siyaasadda, haddana waxaana ku nahay noolasha, waa barako, Alxamdulilaah.” ayay Ilhan ku qortay sawir ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Instagram-ka.
Xiriirka haasaawe ee Ilhan Cumar iyo Mynett ayaa soo shaac baxay sanadkii la soo dhaafay kadib markii xaaska ay wada joogeen Mynet, oo lagu magacaabo Beth Mynett oo 55 sano jir ah ay dalbatay furriin.
Mynet ayaa haatan Ilhan Cumar u qaabilsan dhanka ololaha doorashada.
Ilaah Cumar iyo Seygeeda hore iyo Carruurta ay isku dhaleen /Sawir hore/Keydka
Warbaahinta Fox News ayaa ku soo warrantay in xaaska Mynett ay dalbatay furiin ka dib markii ay tuhuntay in saygeeda uu xiriir jaceyl la la leeyahay Ilhaan Cumar.
Tags: Beth Mynett, Ilaah Cumar oo la aqal gashay Tim Mynett, Ilhan Cumar, Minnesota, Warbaahinta Fox News ee dalka Mareykanka
4 qof oo looga shakiyay cudurka Coronavirus oo lagu karantiilay Muqdisho
3 thoughts on “Ilhaan Cumar oo shaacisay inay la aqal gashay Tim Mynett oo ah la taliyaheeda arrimaha siyaasadda”
Nasiib daro weyn ayay ummaddeena Soomaaliyeed ku tahay sidan ay Ilhaan u dhaqantay oo waliba aafad xun ku noqon doonta gabdhaha da’yarta ee ay dhaleen jaaliyadaha waddamada Galbeedka ku nool. Anigu isla waagii ay Ilhaan isku qaadqaadday siyaasadda Mareykanka ayaan si xun uga dayriyay sababta oo ah meeshaasu ma aha goob haweeneey towxiidsatay ka ag dhawaato in ay ku biirto iska daa ee.
Qodobkoo muhiim ah ee qisadan ku duugan yaynaan moognaanin, kaas oo ah in ay Ilhaan markeedii horeba ahayd cilmaaniyad diinteena ka arradan oo xayaatada libinteeda ka aaminsan in ay tahay White House oo laga dhex qaxweeyo iyo idaacadaha oo laga dhex amaano. Dhaqan aad looga kurboodo ayay runtii hablaheena u horseedday oo waalidiinta ayaa looga baahan yahay in ay gabdhahooda yaryar ku baraarujiyaan xaqa sida uu yahay iyo qaladka ba’an ee ay Ilhaan ku dhacday sii aan wax caadi ah loo qaadanin.
“Hooyo ninkan waa boyfriendkayga waan isku guursan rabnaa”
“Alla hooyo ninku ma kuu Islaamayaa?”
“Maya hooyo, diin oo dhan buu naceb yahay”
“Alla hooyo macaan….”
“..hooyo waa iska caadi dee reer baadiye ha iska dhigin”
“Alla hooyo caadi ma aha muslim baynu nahay oo….”
“Ah! hooyo Ilhaan Cumar ba sow tii ninka gaalka ah guursatay? Waa caadi”
Masiibo intaasaa noogu filan oo wayna dhici doontaa.
March 14, 2020 at 18:23
lkin waxaa la leeyahay wuu islaamay Seyga cusub ee Ilhaan cumar, warka cusub ma aqrinin miyaane saaxiib. warkaas ayaa kaa dambeeyay.